Tababar Kor Loogu qaadayo Luuqada Afka Hooyo Ee Soomaaliga - Cakaara News
Tababar Kor Loogu qaadayo Luuqada Afka Hooyo Ee Soomaaliga
Jarati(CN) Khamiis, 4ta February 2016, si kor loogu qaado luuqada afka soomaaliga ayaa waxaa maalmahanba tababaro joogta ah ka socdeen dhamaan gobolada uu deegaanku kakooban yahay.
Hadaba waxaa maanta degmada jarati ee gobolka afdheer kaqabsoomay tababar lamid ah tababarada gobolada kasocda oo sare loogu qaadayo tayada barayaasha afka soomaaliga ee dhamaan dugsiyada gobolka afdheer.
Tababarkan oo uu fulinayo xafiiska waxbarashada DDSI oo kaashanaya wasaarada waxbarashada heer federal, ha’yada RTI iyo USAID. Waxaana lagu tababarayaa macalimiinta afka soomaaliga ee dhamaan degmooyinka gobolka oo ay tiradoodu kabadantahay 261 bareyaal.
Tababarkan ayaa waxaa kahadlay gudoomiye kuxigeenka gobolka afdheer mudane Cabdi Maxamed Ibraahim oo uga warbixiyay macalimiinta faaiidada uu tababarkan leeyahay islamarkaana ku dhiirigaliyay inay si fiican uga faaiidaystaan una ilaaliyaan wakhtiga isagoo kula dardaarmay inay si fiican uga sii faaiidayeen ardayda.
dhanka kale macalimiinta tababarka loo hayay ayaa soo dhaweeyay qaadashada tababarkan iyagoo sheegay in faaiidada ay tababarkan ka helaan ay gaadhsiin doonaan ardayda ilaa heer tuulo.